अमेरिकाले लोकतन्त्रबारे सम्मेलन गर्दै, चीन र रसियालाई निम्तो दिइएन
शुक्रवार, मंसिर १७, २०७८ ०७:३६:०३ युनिकोड
थप ६ जनाको मृत्यु, २९८ जनामा संक्रमण पुष्टि
शुक्रबारदेखि दिल्लीका सबै विद्यालय अनिश्चितकालका लागि बन्द
खोप लगाएका व्यक्तिमा पनि ओमिक्रोन संक्रमण
विदा बसेर कार्यवाहक तोक्न प्रधानयायाधीशलाई सत्ता गठबन्धनको सुझाव
सर्वोच्चमा बारका प्रतिनिधिलाई छलफलका लागि बोलाइयो
आजदेखि राप्रपा एकता महाधिवेशनको नेतृत्व चयन प्रक्रिया सुरु
थप ३ जानाको मृत्यु, ३१६ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
अत्यावश्यक काम बाहेक विदेश भ्रमणमा नजान आग्रह
राप्रपाको एकता महाधिवेशन सुरु
समाज लघुवित्त नेप्सेको निलम्बन सूचीमा, सर्वसाधारणको रकम बन्धक
एक्कासी बढ्यो चिसो, वर्षा र हिमपातको सम्भावना
कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोन भित्रिन नदिन ‘यात्रा व्यवस्थापन आदेश’ जारी
नेकपा एमालेको अध्यक्षमा ओली पुनः निर्वाचित
महाधिवेशन लम्बिदा थप डेढ करोड बढी खर्च
थप ४ जनाको मृत्यु, ३३२ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
आजपनि बढ्यो नेप्से, ४ अर्ब २१ करोड कारोबार
मंगलबार, मंसिर ७, २०७८ नेपाली हामी
एजेन्सी, ८ मंसिर । अमेरिकाले आगामी महिना लोकतन्त्रबारे सम्मेलन गर्ने भएको छ । यही डिसेम्बर ९ र १० गते गर्न लागिएको भर्चुअल सम्मेलनमा चीन र रसियालाई भने बोलाइएको छैन । भारत, पाकिस्तान र इराकसहित अमेरिकाका गठबन्धन देशहरूलाई भने बोलाइएको छ ।
चीन र अमेरिकाबीच तनाव बढिरहेका बेला राष्ट्रपति जोन बाइडेन प्रशासनले आयोजना गर्न लागेको सम्मेलनलाई विश्व समुदायले चासोपूर्वक हेरिरहेको छ । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयकाअनुसार सम्मेलनमा ११० देशलाई निम्ता दिइएको छ ।
सम्मेलनमा चीनले आफ्नो अभिन्न राज्य मान्दै आएको ताइवानलाई समेत बोलाइएको छ । तर, अफगानिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका र टर्कीलाई बोलाइएको छैन् । ताइवानसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध तोड्न चीनले अन्य देशहरूलाई दबाब दिइरहेका बेला सम्मेलन आयोजना हुँदैछ । आफ्नो स्वतन्त्रताका बारेमा चीनलाई बोल्ने अधिकार नभएको ताइवानले बताउँदै आएको छ ।
ताइवान मामिलामा चीनले आक्रमण गरे आफूले हेरेर नबस्ने अमेरिकाले बताउँदै आएको छ । एक साताअघि चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ र अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनबीच भएको भर्चुअल संवादमा राष्ट्रपति सीले अमेरिकालाई आगोसँग निहुँ नखोज्न चेतावनी दिएका थिए ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, मंसिर ७, २०७८, ११:५४:००
कोरोनाविरुद्धको पूर्ण डोज लगाएकाहरुलाई अस्ट्रेलिया प्रवेश खुल्ला
तालिबानले लगायो महिलालाई टेलिभिजन नाटकमा प्रतिबन्ध
थप ६ जनाको मृत्यु, २९८ जनामा संक्रमण पुष्टि बुधवार, मंसिर १५, २०७८
विदा बसेर कार्यवाहक तोक्न प्रधानयायाधीशलाई सत्ता गठबन्धनको सुझाव नेपाली हामी
सर्वोच्चमा बारका प्रतिनिधिलाई छलफलका लागि बोलाइयो नेपाली हामी
आजदेखि राप्रपा एकता महाधिवेशनको नेतृत्व चयन प्रक्रिया सुरु नेपाली हामी
थप ३ जानाको मृत्यु, ३१६ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि मंगलबार, मंसिर १४, २०७८
समाज लघुवित्त नेप्सेको निलम्बन सूचीमा, सर्वसाधारणको रकम बन्धक मंगलबार, मंसिर १४, २०७८
एक्कासी बढ्यो चिसो, वर्षा र हिमपातको सम्भावना मंगलबार, मंसिर १४, २०७८
आज गाईजात्रा पर्व सोमवार, भदौ ७, २०७८
एसईईमा मनपरी नम्बर आइतवार, श्रावण २४, २०७८
आज विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाइँदै आइतवार, बैशाख १९, २०७८
कोरोनाभाइरसः सङ्क्रमण फैलिन थालेपछि कोरियामा कार्यरत नेपाली नागरिक त्रासमा
४४ हजार नेपाली बस्ने कोरियामा कोरोनाको त्रास
Media Journal Pvt. Ltd.
Web: www.mediajournal.com.np Nepal : 01-5527923 Portugal : Narayan Aryal
बिमल खड्का, गोदावरी न.पा.–०६, ललितपुर ९८५१०००५०९
#ओली–प्रचण्डबीच भेटवार्ता, सञ्चारमन्त्रीको अडियो बारे छलफल
#Corona virus update
#gold in nepal
©Nepali Haami-2021 All rights reserved.